के कोरोना संक्रमण मौसमानुकुल रोग हो? | पहिलो बोली
के कोरोना संक्रमण मौसमानुकुल रोग हो?
४७७१ पटक पढिएको
२२ जेठ, काठमाडौंः
धेरै जसो संक्रात्मक रोगहरु मौसमको परिवर्तनसँगै आउँछन, र जान्छन् । फ्लुसँगै नोरोभाईरसजस्ता संक्रमण प्रायः चिसो मौसमको महिनामा देखिन्छन । अन्य, टाईफाईडजस्ता रोगहरु गर्मि महिनामा उच्च हुन्छन् । दादुराका संक्रमण गर्मि महिनामा ओरालो लाग्छन, जबकी उष्ण क्षेत्रमा भने सुख्खा मौसमको समयमा यसले संक्रमण देखाउँछन ।
विश्वप्यापी फैलिएको कोभिड १९ लाई लिएर अहिले अधिकांश मानिसको मनमा उठेको प्रश्न हो, के यो पनि मौसमानुकुल संक्रमण हो ? चीनमा मध्य डिसेम्बरताकादेखा परेपछि यो संक्रमण अहिले युरोप र अमेरिका लगायतमा अत्याधिक गतिमा फैलिरहेको छ ।
अधिकांश महामारीहरु चिसो मौसम भएका क्षेत्रहरुबाट फैलिएका देखिन्छन, जसले गर्मिको आगमनसँगै यी संक्रमणको असर कम हुने आशा जगाईदिन्छ । अधिकांश विज्ञहरु भने भाईरसको अन्त्य गर्मिमा हुन्छ भन्नेमा पूर्ण रुपमा विश्वष्त हुननसकिने भएकाले सावधानी अपनाउन सुझाउँछन् ।
र, उनीहरुले सावधानी अपनाउन सुझाउनु पनि जायज छ । आधिकारिक रुपमा सार्स–कोभ–२–( क्ब्च्क्(ऋयख्(द्द) नाम दिईएको कोभिड १९ को संक्रमण नित्याउने भाईरुस नयाँ हो, त्यसैले मौसम अनुसार यसको संक्रमणमा कस्ता परिवर्तन आउँछन भन्ने कुनै तथ्यांक उपलब्ध छैन । यो भाईरस २००३ ताका फैलिएको सार्स भाईरससँग निकै नजिक छ । मौसमको परिवर्तनले सार्सको संक्रमणमा कस्तो असर ल्याउँछ भन्नेमा पनि थोरै मात्र जानकारीहरु उपलब्ध छन् ।
तर, अन्य कोरोनाभाईरसलाई हेर्दा केही उपायहरु छन्, जसले कोभिड १९ पनि मौमसानुकुल बन्ने सक्ने सम्भावना देखाउँछ ।
१० वर्ष अगाडी बेलायतको एडिनबरा विश्वविद्यालयको सरुवा रोग केन्द्रका केट टेम्प्लेटनले विभिन्न अस्पतालहरु र एडिनबरामा भएका जिपी सर्जरीहरुमा, स्वासप्रस्वासमा समस्या देखिएका बिरामीहरुमा गरिएको अध्ययन अनुसार विभिन्न तीन किसिमका कोरोना भाईरसहरु मौसमानुकुल छन् । ईन्फ्लुएन्जाको जस्तै यी भाईरसहरुले पनि डिसेम्बरदेखि अप्रिल महिनासम्म संक्रमण देखाउँछन् । तर, चौथो कोरोना भाईरस, जुन प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका मानिसमा देखा पर्नेगर्छ, त्यो छिटपुट रुपमा देखापर्ने गर्छ ।
कोभिड १९को असर पनि मौसमअनुसार फरक हुनसक्ने संकेत देखा परेको आशंका छ । विश्वफर फैलिएका नयाँ महामारीको संक्रमण चिसो र सुख्खा अवस्थामा बढि हुने प्राप्त तथ्यांकले देखाउँछ ।
कोविड १९ को संक्रमणको मौसमि कारणहरु माथि विभिन्न ५०० ठाउँमा गरिएको अप्रकाशित अध्ययनले यो भाईरस र यसको फैलावटसँग ती स्थानहरुको तापक्रम, वायुको गति, र सापेक्षिक आद्रताबिचको सम्बन्धलाई देखाउने प्रयास गरेको छ । अर्को अप्रकाशित अध्ययनका अनुसार, उच्च तापक्रम भएको क्षेत्रमा कोविड १९ संक्रमण कम देखिएको छ, तर तापक्रम मात्रैले यस्तो हुनुमा प्रभाव भन्न सकिदैंन् ।
अर्को, अप्रकाशित अध्ययनले शमसितोष्ण र चिसो मौसमसँगै सुख्खा मौसममा अहिले फैलिएको कोविड १९ महामारीको संक्रमण अति संवेदनशिल हुने जनाएको छ । तर, विश्वका उष्ण क्षेत्रमा यसले कम असर गर्ने शोधकर्ताहरु बताउँछन् । तर, मौसम अनुसारको खास तथ्यांक उपलध्य नहुँदा शोधकर्ताहरु आफ्नो कम्युटरले गर्ने वर्षभरिको सम्भावित पूर्वानुमानको आधारमा छन् ।
कोरोना भाईरसको मौसमानुकुलतामा गरिएको अध्ययनको तथ्यांकको आधारमा कोविड १९, जुन अहिले विश्वकै मावन जनसंख्यामा फैलिरहेको रोग हो, यसको मौसमसँगको सम्बन्ध खोट्याउनु निकै चुनौतीपूर्ण छ । प्रायः महामारीको रुप लिने भाईरसहरु मौसमानुकुल हुने भएतापनि कोभिड १९ लाई लिएर अहिलेनै यस्तो आकंलन गर्नु भने युक्तिजनक हुँदैन् ।
महामारीहरुले साधारण अवस्थमा जस्तो हरेक समय मौसमानुकुलताको रुवरुप अनुशरण गर्दैन् । उदाहरणको लागि, प्रायः फ्लु चिसो मौसममा फैलिएर महामारीको रुप लिने भएतापनि स्पेनिस फ्लु भने गर्मिको मौसममा फैलिएको थियो ।
‘कालान्तरमा कोभिड १९ले महामारीको रुप लिनेछ भन्नेमा हामीले सम्भावना देखेका छौं,’ स्टकहोमस्थ्ति कारोलिन्स्का इन्टिच्युटमा भाईरसका विज्ञ तथा संक्रामक रोग विशेषज्ञका रुपमा रहेका प्राध्यापक यान अल्बर्ट बताउँछन, ‘र त्यो बेला यो भाईरसले मौसमानुकुलता नदेखाएमा अच्चम्म हुनेछ । मुख्य प्रश्न, यो भाईरसको मौसमानुकुलताले अझैं यसलाई कति संक्रामक बनाउँछ र यसले महामारीको रुप लिने कति क्षमता राख्छ भन्ने हो । हामीलाई यो थाहा छैन, तर यसले महामारीको रुप लिनसक्छ भन्नेमा हामी सचेत हुन आवश्यक छ ।’
त्यसैले, अन्य कोरोना भाईरसको मौसमानुकुलतालाई लिएर कोभिड १९को महामारीको संक्रमणको पूर्व आकंलन गर्नमा पनि हामीले सावधानी अपनाउनु पर्छ । तर, किन अन्य सम्बन्धीत कोरोनाभाईरस मौसमानुकुल थिए, र तीनको मौसमानुकुलताले हामीलाई यो समयमा के आशा जगाउँछ?
कोरोनाभाईरस बाहिरी तह भएको भाईरसको परिवार पर्छ । त्यसको अर्थ उयो भाईरसको बाहिरी तह लिपिड बाईलेर भनिने चिल्लो पर्दाको झिल्ल्ी हुने गर्छ, जुन प्रोटिनले बनेको हुन्छ र ताजमा भएको जस्तो काँडा आकारको देखिने गर्छ । यहि कारणले यीनीहरुलाई कोरोना नाम दिईएको छ, जसको अर्थ ग्रिक भाषामा ताज भन्ने हुन्छ ।
यस्तै प्रकारले बाहिरी तह भएका अन्य भाईरसमा भएका अध्ययनका अनुसार, बाहिरी तह नहुने भाईरसको तुलनामा यी भाईरसहरु तापक्रम प्रति अतिसंवेदनशिल हुन्छन । चिसो अवस्थामा यो चिल्लो झिल्ली रबरजस्तै कडा भएर जान्छ । उदाहरणका लागि पकाएर राखिएको बोको चिसिएपछिको अवस्थालाई लिन सकिन्छ । यसले भाईरस परिचालकको शरिरभन्दा बाहिर हुँदा लामो समयसम्म बचाईराख्छ । अधिकांश बाहिरि तह भएका भाइरसहरु यहि कारणले मौसमानुकुल हुन्छन् ।
अनुसन्धानका अनुसार, सार्स कोभ २ भाईरस ठोस सतह र स्टिलमामा २१–२३ डिग्री सेल्सियसको बिचमा र ४० प्रतिशत सापेक्ष आद्रता भएको अवस्थमा ७२ घण्टाभन्दा बढि प्लाष्टिक जस्तै भएर बाँच्न सक्छन । कोभिड १९ले अन्य तापक्रममा ठ्याक्कै कस्तो विशेषता देखाउँछन भन्ने बारेमा अनुसन्धान बाँकी नै छ, तर अन्य कोरोनाभाईरसमाथि भएको अनुसन्धान अनुसार तिनीहरु ४ डिग्री सेल्सियसमा २८ दिनभन्दा बढि बाँच्न सक्छन ।
कोभिड १९सँग अधिकांश विशेषता मिल्ने २००३ मा महामारीको रुप लिएको सार्स भाईरस पनि चिसो र सुख्खा मौसममा बढि बाँच्ने देखिएको थियो । सुख्खा सार्स भाईरस २२–२५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम र ४० देखि ५० प्रतिशत सापेक्ष आद्रता रहेको चिल्लो सतहमा पाँच दिनसम्म बाँच्ने देखिएको थियो । तापक्रम र सापेक्ष आद्रता बढदै जाँदा भाईरसको आयु कम हुँदै गएको थियो ।
‘ह्याछिउँ वा खोकीबाट संक्रमित व्यक्तिको शरिरबाट भाईरस बाहिर आएपछि यसको बाँच्ने शक्तीमा मौसमको ठूलो हात हुन्छ,’ मड्रिड, स्पेनस्थित नेसनल म्युजियम अफ नेचुरल साइन्सेजमा वातारणिय परिवर्तनले जैविक विविधतामा पार्ने असरमाथि अध्यनरत म्युगेल आरुजो भन्छन्, ‘जति लामो समयसम्म बाहिरी वातावरणमा भाईरस जीवित रहन्छ, त्यत्ति नै यसको संक्रमणले धेरैभन्दा धेरै मानिसलाई छुने क्षमता राख्छ, र महामारीको रुप लिन सक्छ । सार्स कोभ २ विश्वभर निकै चाडो फैलिएको छ, प्रायः संक्रमण चिसो तथा सुख्खा मौसम भएको स्थानमा देखिएका छन् । उनको तथ्यांकका अनुसार विश्वभर फैलिएको संक्रमणको स्वरुले प्रायः गरेर उष्ण मौसम भएका ठाउँभन्दा बाहिर छन् ।
कोभिड १९ले यहिँ स्वरुपमा तापक्रम र सापेक्ष आद्र्रतासँग संवेदनशिलता देखाएमा फरक समयमा फरक ठाउँमा यो महामारीको रुपमा फैलिन सक्छ भन्ने अरुजोको आकंलन छ ।
‘दुई फरक फरक भाईरसले एकै किसिमको विशेषता देखाउँछ भनेर आश गर्नु उपयुक्त छ,’ अरुजो भन्छन् ‘तर, यो एउटै किसिमको अवस्था भने होइनश । यो भाईरस मानिसबाट मानिसमा सर्ने हो । कुनै ठाउँमा भएको मानव भिडले कति मानिसमा यो सर्न सक्छ भन्ने सम्भावना देखाउँछ । मानिसको जीवन शैलीले नै भाइरसको संक्रमणको गतिलाई निर्धारण गर्छ ।’
मेरिल्याण्डको विश्वविद्यालयको एक अध्ययन अनुसार कोभिड १९ भाईरस संसारका प्रायः ५ देखि ११ डिग्री सेल्सियस तापक्रम र सापेक्ष आद्रता न्युन भएका शहरहरुमा चाडै फैलिने गरेका छन् ।
तर, उष्ण भुभागहरुमा पनि गन्य संख्यामा यसका संक्रमण देखिएका छन् । हावर्ड विश्वविद्यालयको मेडिकल स्कुलका अध्येताहरुले एसियामा गरेको एक अध्ययन अनुसार यो काभिड १९ भाईरसको महामारी अनुमान गरिएको भन्दा कम मौसमानुकुल भएको कुरा दर्साउँछन् ।
पछिल्लो समयमा चीनको जिलिन र हेलोङ्गजियाङ्ग जस्ता चिसो र सुख्खा क्षेत्रसँगै ग्वाङ्सी र सिंगापुर जस्ता उष्ण क्षेत्रमा देखिएको यसको फैलावटको अध्ययन पश्चात यस भाइरसको संक्रमण बसन्त र गर्मि यामको आगमनसँगै कम नहुने कुरा देखिएको अध्येताहरु बताउँछन । जनस्वास्थ्यका सुविधाहरुलाई अत्याधिक मात्रामा बढाएमा मात्रै यो भाईरसको संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सकिने उनीहरु सुझाउँछन् ।
भाईरसको बाँच्ने क्षमताभन्दा पनि यसको संक्रमण मानवदेखि मानवसम्म ज्यादा हुने भएकाले यो सुझाव दिएको अध्येताहरुको भनाई छ । र, यहि कारणले भाईरसको मौसमानुकुलताको अध्ययन कठिन हुन गएको छ । कोभिड १९ जस्ता रोगहरु मानिसले फैलाईरहेका छन्, र मानिसको जीवनशैलीको मौसमानुकुल परिवर्तले पनि यस भाईरसको संक्रमणको संख्यामा परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।
उदाहरणका लागि, युरोपमा हुने दादुरा प्रकोप स्कुल संञ्चालन हुने महिनामा धेरै हुने गर्थे, र विदाको समयमा बालबालिका बिच सम्पर्क कम हुने हुँदा प्रकोप पनि कम हुने गथ्र्यो । २५ जनवरीमा पर्ने चीनिया नयाँ वर्षमा विश्वभरबाट चीनमा मानिसहरुको आवतजावत भएकाले वुहानबाट कोभिड १९ विश्वभरका अन्य शहरमा फैलिन सजिलो भएको हो ।
साथैं, मौसमले पनि मानिसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा भूमिका खेल्छ । यसै कारण हामी संक्र्रमणप्रति मानिस असुरक्षित हुने गर्छ । हाम्रो शरिरमा भएको भिटामिन डिको मात्राले पनि हामीलाई संक्रमणप्रति कति सुरक्षित÷असुरक्षित हुन्छौं भन्ने प्रमाणहरुले देखाउँछन । चिसो मौसममा घामको किरण प्रयत्क्ष नहुनु र घरभित्रै चिसो वायुको विपरित राखेर कपडामा आफूलाई बेर्ने भएकाले पनि यो समयमा हाम्रो शरिरले कम भिटामिन डि उत्पादन गर्छ । तर, केही शोधअनुसार यो परिभाषा र फ्लुजस्ता मौसमानुकुल रोगहरुको कुनै सम्बन्ध छैन ।
विवादास्पद कुरा के हो भने केही अध्ययनले चिसो मौसमले हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा ह्रास ल्याउँने बताउँछ भने केहीले भने चिसो मौसममा शरिरमा भएका रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने कोषिको मात्रा बढि हुने बताउँछन ।
तर, सापेक्षिक आद्रताले हाम्रो रोगप्रतिरोधात्मक क्षमतासँग प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने तथ्यमा भने बलियो प्रमाण भेटिन्छन् । जब वायुमा आद्रताको मात्रा कम भएर सुख्खा हुन्छ, यसले हाम्रो फोक्सो र स्वासनलिलाई लेप्ने म्युकसको मात्रालाई पनि कमि ल्याउँने विश्वास गरिन्छ । म्युकस अर्थात लेसिलो पदार्थले हाम्रो स्वासप्रस्वास प्रणालीमा संक्रमण हुनबाट प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान गरिरहेको हुन्छ । लेसिलो पदार्थ कम हुँदा संक्रमणको जोखिम उच्च हुन्छ ।
कोभिड १९ को आक्रमकता र मौसम बिच कुनै किसिमको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको कुरा चिनिया वैज्ञानिकहरुको एक अध्ययनले खुलासा गरेको छ । वुहानमा भएका २३०० मृत्यु र त्यस दिनको सापेक्षिक आद्रता, तापक्रम र प्रदुषणको आधारमा यो खुलासा गरेका हुन । यद्यपी उनीहरुको शोध कुनै एकेडेमिक जर्नमा प्रकाशित भई नसकेतापनि उनीहरुको अनुसन्धानले आद्रता र तापक्रम उच्च भएको दिनहरुमा मृत्युदर कम भएको देखाएको छ । सँगसँगै उनीहरुको अनुसन्धान अनुसार अधिकतम र न्युनतम तापक्रम भएका दिनहरु बिचको मृत्युदरको अनुपात उच्च छ । तर, यो शोध कम्युटर केन्द्रित भएर गरिएकाले यहि प्रकारको सम्बन्ध चीन बाहेकका विश्वभरिका अरु ठाउँमा देखिन्छ वा देखिदैंन भन्ने कुरा भने थप अनुसन्धानको विषय हो ।
कोभिड १९ संक्रमण नित्याउने भाईरस नयाँ भएकाले कोही मानिसमा संक्रमण देखिएर निको भईसकेपछि मात्रै उनीहरुमा रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता भएनभएको देखिन्छ । यसको अर्थ भाईरस फैलिन्छ, संक्रमण हुन्छ, र अरु महामारीभन्दा फरक किसिमको महामारी हुनसक्छ भन्ने हो ।
फ्रेन्च इन्टिच्युट अफ हेल्थ एण्ड मेडिकल रिसर्च कि निर्देशक भिट्टोरिया कोलिज्जा भन्छिन, ‘हवाई यात्राको माध्यमबाट यो भाईरस विश्वभर फैलिएको छ । तर, एकपटक कुनै पनि समुदायमा एक व्यक्तिमा यसको संक्रमण देखिएपश्चात मानिसहरुको बिचको भेटघाट आदीले समुदायमा संक्रमण फैलाउन मद्दत गरेको छ । मानिस बिचमा सामाजिक दुरी बढाउँदा पनि यसको संक्रमणको दर घटने देखिन्छ । विश्वभरिका सबैजसो राज्यहरुले सार्वजनिक ठाउँहरुमा लड डाउन गरेर यहि गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।’
‘अहिले सम्म काभिड १९ मौसमि रोग हो होईन भन्ने कुराको कुनै प्रमाण छैन,’कोलिज्जा भन्छिन, ‘मानिसको जीवनशैलीले पनि यसमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।’ तर, अहिले संक्रमण रोक्न भन्दै लगाईएका लक डाउन वा चालिएका कदमहरु प्रभावकारी छ भन्ने कुरामा उनी प्रश्न गर्छिन । ‘मानवबाट मानवमा भाईरस फैलिने भएकाले सामाजिक दुरी बढाएमा भाईरसको संक्रमण आंशिक रुपमा न्युनिकरण हुन्छ ।’
र, यदि आउँदो महिनाहरुमा कोभिड १९ को संक्रमणको संख्यामा कमि आएमा यसका यावत कारणहरु हुन सक्छन् । रोकथामका उपाय, लड डाउन, र आईसोलेसन, मानिसमा रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बढदै जानु, अथवा मौसम परिवर्तनको असर पनि हुनसक्ने, एल्बर्ट मोडलले देखाउँछ ।
एल्बर्ट भन्छन, ‘यदि यो मौसम परिवर्तनको असर भएमा यसले माथि उल्लेख गरेका अन्य दुई कारणलाई छायामा पार्न सक्छ । सफलतापूर्वक लक डाउन गरिएका देशहरुमा मानिसहरु स्वतः कम जोखिमको नजिक छन् । त्यसैले, यदि आउँदो शरद र गृष्ममा कोभिड १९ अर्को लहर फैलियो भने म त्यत्ति धेरै अच्चमित हुनेछैन ।’
गर्मि याममा कोभिड १९ ले संक्रमणमा मौसमानुकुल केही परिवर्तन देखाएतापनि यो पूर्ण रुपमा निर्मूल हुन्छ भन्नेमा आशंको केही विज्ञका बताउँछन । तर, यसको संक्रमणको संख्यामा हुने भारी गिरावटले केही फाईदा भने दिन सक्ने सम्भावना छ ।
‘हामीले संक्रमण रोक्नको निम्ति चालिएका कदमहरु अर्थतन्त्रको लागि हानीकारक छ । तर, यसले यो महामारीलाई गर्मि यामसम्म धकेल्न सक्छ ।’ एल्बर्ट भन्छन्,‘कोभिड १९ मा केही मौसमानुकुलता भएमा यसले स्वास्थ्य प्रणालीमा तयारीका लागि केही समय अवश्य प्रदान गरिदिन्छ ।’
र यो महामारी विरुद्ध जुझ्नका लागि लागि परेको संसारलाई यो समय नै अत्यावश्येक समय सावित हुनसक्छ ।
रिचर्ड ग्रे तयार गरेको बीबीसीमा छापिएको लेखको नेपाली भावानुवाद ।